भर्खरै बिहे गरेकी करिष्मा कति सपना थिए होलान् सजाएका, च’ट्या’ङ मा परी सधैंका लागि अस्ता’इन यो दुनियाँ बाट ! – Dainiki Online
10/05/2021 10/05/2021 adminLeaveaComment on भर्खरै बिहे गरेकी करिष्मा कति सपना थिए होलान् सजाएका, च’ट्या’ङ मा परी सधैंका लागि अस्ता’इन यो दुनियाँ बाट !
गुल्मीमा च’ट्या”ङ लागेर घा’ई’ते भएकी १८ वर्षीय करिष्मा गाहाको मृ’त्यु भएको छ। बिहान सुतिरहेको समयमा घरमा च’ट्या’ङ लागेर घाईते भएकी करिस्मा लाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल तम्घास पुर्याईएको थियो। उक्त अस्पतालमा उपचार हुन नसकि पाल्पा रिफर गरिएकी गाहाको बाटोमा नि’धन भएको तम्घासबाट बिमल छन्तेलले जानकारी दिनुभयो। च’ट्या’ङ लागेर करिस्माको मुख,कपाल जलेको थियो। *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
बिहान सुतिरहेको समयमा घरमा च:ट्या’ङ पर्दा उजिर मगर सगैं
उनकी श्रीमती ६२ वर्षीय सतिकला गाहा, छोरा ३७ वर्षीय तुल
बहादुर गाहा, बुहारी ३२ वर्षीय जुनी गाहा, नातिनी बुहारी १८ वर्षीय करिष्मा गाहा, नातिनी १४ वर्षीय मेलिना गाहा र नाति १८ वर्षीय जेनित गाहा घा’ई’ते भएका हुन् । त्यस्तै छिमेकी चित्र बहादुर गाहा र उनकी श्रीमती ज्योतिकला गाहा पनि घा’ई’ते भएका छन् । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***